KAMALA HARRIS: Ma tahay isbedel doonka ay iska dhigayso? (Bal aannu qodno mowqifyada ay ka taagan tahay arrimaha Bariga Dhexe) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka KAMALA HARRIS: Ma tahay isbedel doonka ay iska dhigayso? (Bal aannu qodno...
KAMALA HARRIS: Ma tahay isbedel doonka ay iska dhigayso? (Bal aannu qodno mowqifyada ay ka taagan tahay arrimaha Bariga Dhexe)
(Washington, DC) 12 Agoosto 2020 – Musharraxa Dimoqraadiga ee doonaya inuu xafiiska ukunka lagu shabbahey ee Aqalka Cad Nofeembar ku dangiigsado, Md Joe Biden oo 77-jir ah sidaana ku noqon doona madaxwaynihii ugu da’da waynaa ee xil qabta haddii Nofeembar la doorto, ayaa wuxuu musharraxa Madaxwayne Xigeenka ka dhigay Kamala Harris oo ka mid ah qoryaha dhexe ee xisbigaasi.
Kamala Harris oo isu sawirta inay tahay isbedel doon ayaa la rumaysan yahay inay ka mid tahay Geed-fadhiga (establishment) siyaasadda oo ah kuwa ragaadiya in isbedelba dhoco.
HORTA WAA AYO KAMALA HARIS?
Waa haweenay ay iska dhaleen aabbe Jamaican ah iyo hooyo Hindi ah oo soo galooti wada ah, waxay ku dhalatay magaalada Oakland, California. Waxay baratay sharciga iyadoo ka shaqa bilowday degmada Alameda County. 2003, waxay u tartantay inay noqoto xeer ilaaliyaha guud ee magaalada San Francisco.
Balse 7 sanadood kaddib waxaa loo doortay xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California oo idil, taasoo ka dhigtay haweenaydii ugu horreeysey ee madow ah ee booskaa abid qabata.
Waxay heer qaran gaartey 2016-kii markaasoo loo doortay inay ku biirto Aqalka Hoose ee Senet-ka, iyadoo noqotay qof ku taagan MW muran dhaliska ah ee Donald Trump.
Sanadkii 2019-kii, waxay isu sharraxday xilka madaxtinnimada Maraykanka taasoo ay ka hartay intaanba la bilaabin codayn horaadkii Iowa kaddib markii ay codad ku filan kasban waydey.
Bishii Maarso, waxay taageertay musharraxnimada Biden oo ay ku daba fayleen inta badan geed fadhiga xisbiga Dimoqraadigu, iyagoo ka horjeestey ninka isbedel doonka ah ee Senatar Bernie Sanders.
Harris waxay isku sheegtaa inay tahay isbedel doon, balse waxay si kal iyo laab ah u taageertaa qadiyadda Israel, taasoo ay ku neceb yihiin dad badan oo liberaal ah oo aad u raacsan dhanka bidix.
Halkan waxaad ka baran kartaa mawaaqifteeda mabda’iga ah ee Bariga Dhexe:
Iiraan: Waxay taageertay heshiiskii nukliyeerka
Harris ayaa aad Trump waxay 2018 ugu dhaliishay ka bixitaankiisii heshiiskii nukliyeerka Iiraan, kaasoo ay Iiraan ku bedelatey inay ka harto samaysiga hubka nukliyeerka oo ay ku bedelanayso mid silmi ah, iyada oo laga qaadayo cunaqabataynta saaran.
“Go’aanka uu Trump ku gaarey inuu ka boxo heshiiska nukliyeerku wuxuu halis gelinayaa amaankeenna qaranka wuxuuna naga goynayaa xulufadda aannu aadka iskugu dhownahay,” ayay ku tiri war ay kasoo saartay.
Horraantii sanadkan 2020, kaddib markii uu Maraykanku kaarajiyey Jeneraal Qassem Soleimani, Harris waxay wax ka hindistey sharci Pentagon ka hor istaagaya inay helaan lacag loo adeegsado dagaal lala galo Iiraan.
“Ha khaldamin: Soleimani waa cadowga Maraykanka, balse falka Trump wuxuu dab kusii daarayaa xiisadda taagan gobolkana wuu sii qasayaa,” ayay tiri xilligaas.
“Waa asaasi inuu Koongaraysku dhab u qaato mas’uuliyaddiisa dastuuriga ah oo xiisaddan qaboojiyo.” ayay daba dhigtay.
La soco qaybo kale…..
Previous articleDAAWO: ”Af Soomaali fahmi mayno!” – Qaxooti Yamani ah oo dibedbax ka dhigay magaalada Hargaysa!
Next articleSACAD AL-JABRI: Nin jiiro dhib badan uga soo baxay Boqortooyada Sucuudiga! (Qaybtii 2-aad)